30 Nov 2017 . 6:06 PM
အခရာရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ.. မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ဒီတစ်ပတ်တော့ Justice League ဆက်ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်သလို ဗိုလ်အောင်ဒင်နဲ့ အခြားရုပ်ရှင်ကားသစ်တွေလည်း ဝင်လာတဲ့အတွက် ဒီတစ်ပတ်လည်း ပျင်းစရာဖြစ်မနေဘဲ ရုပ်ရှင်ရုံရိပ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးချွေးသိပ်လို့ ရနေဦးမှာပါ။
လပ်ကီးဆဲဗင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ဒါရိုက်တာကိုဇော်(အာရုဏ်ဦး) ရိုက်ကူးထားတဲ့ ငါက ဗိုလ်အောင်ဒင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒီတစ်ပတ်သောကြာဆိုရင် ရုံစတင်ဝင်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား မင်းမော်ကွန်း၊ ပြေတီဦးနဲ့ မင်းသမီး အိချောပိုတို့ အတွဲညီညီပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီကားဟာ အဆိုတော်မနောကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်တွေကို ကူညီရွေးချယ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်လိုရယ်စရာတွေ ယူဆောင်လာမလဲဆိုတာတော့…
ရှေ့ဆောင်၊ မင်္ဂလာစံပြ၊Top Royal ပါရမီစိန်ဂေဟာ၊ မင်္ဂလာ (သိမ်ကြီးဈေး)၊ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ၂၊ Mingalar Cineplex (ဂမုန်းပွင့်၊ စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
9:55AM,12:25PM, 3:00PM, 5:50PM, 8:30PM(Fri to Sun)
9:55AM,12:25PM, 3:00PM, 5:50PM (Mon to Thu)
9:30AM ,3:00PM, 8:30PM (Fri to Sat)
9:30AM ,3:00PM (Sun to Thu)
JCGV City Mall @St.John ပွဲချိန်
9:30AM,3:00PM, 9:00PM (Fri to Sun)
9:30AM,3:00PM (Mon to Thu)
9:30AM, 12:00PM, 2:30PM, 5:00PM, 7:30PM, 9:55PM (Fri to Sat)
9:30AM, 12:00PM, 2:30PM, 5:00PM, 7:30PM (Sun to Thu)
10:30AM ၊ 1:00PM၊ 4:00PM ၊ 7:00PM၊ 9:30PM
Mega Ace Cineplex (ဒေါပုံ၊Capital) ပွဲချိန်
12:15PM ,5:30PM, 8:00PM (Fri to Sun)
12:15PM ,5:30PM (Mon to Thu)
ချစ်ပရိသတ်တို့အတွက် တန်ဆောင်တိုင်မှာ ပျော်စရာတွေပြည့်ဝစေဖို့ ကြည်လင်ဖွယ်မနောတွေဖြစ်အောင်ဗျောသံကို တဒင်ဒင်တီးကာငါကဗိုလ်အောင်ဒင် ကတော့ နမူနာလေးကျွေးလို့အူးနာအောင် လာဖို့ပြင်ပြီးနော်…..
Posted by ငါကဗိုလ်အောင်ဒင် -ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား- on Monday, October 30, 2017
ဒါကတော့ ဒါရိုက်တာ John Woo ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပြီး Hanyu Zhang၊ Masaharu Fukuyama၊ Stephy Qi နဲ့ အခြား သရုပ်ဆောင်တွေလည်း ပါဝင်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ကားမို့ ရုံကို အပြေးလေး သွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာဂမုန်းပွင့်(လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) ပွဲချိန်
ဒီတစ်ခါတော့ ဒရာမာဇာတ်ကားကို အလှည့်ပေးပြီး Wonder ဘက်လှည့်လိုက်ပါဦး။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ R.J Palacio ရဲ့ ဝတ္ထု Wonder ကို ဒါရိုက်တာ Stephen Chbosky က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Julia Roberts ၊ Owen Wilson နဲ့ Jacob Trembley တို့ပါဝင်ထားတဲ့ Wonder ဟာ IMDB Rating မှာ 8.1/10 နဲ့ Rotten Tomatoes Rating မှာ 84% ရထားတဲ့အတွက် ဒရာမာကားကောင်းကောင်းကို ကြည့်ချင်ရင် Wonder ကို ရွေးသင့်ပါတယ်။
9:40AM,12:00PM, 5:30PM (Fri to Thu)
၄။ Justice League – 3D
Justice League ဆိုတာ သူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ရုံတင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခုမှ ရုံတင်ရတဲ့ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကြီးပေါ့ဗျာ။ DC Comics တွေပေါ်အခြေခံပြီး DC Extended Universe (DCEU) ရဲ့ ငါးကားမြောက်ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Zack Snyder ရိုက်ကူးထားပြီး Ben Affleck က Batman၊ Henry Cavill က Superman ၊ Ezra Miller က The Flash ၊ Jason Momoa က Aquaman၊ Ray Fisher က Cyborg၊ Amy Adams က Lois Lane အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ကျွန်တော်တို့ အချစ်တော် Gal Gadot လေးကတော့ အရင်အတိုင်း Wonder Woman ပေ့ါဗျာ။
ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ကြည့်မှ အရသာရှိအောင် ရေးမပြတော့ပါဘူး။ ထူးခြားတာက IMDB Rating 7.4/10 ရထားပြီး Rotten Tomatoes မှာတော့ 37% နဲ့ Rating ပိုင်းနည်းနေတာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ DC နဲ့ Super Heroes ကြိုက်တဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဒီရုံတွေမှာ Booking လုပ်သင့်ပြီဗျို့။
နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာဂမုန်းပွင့်(လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်)၊ မင်္ဂလာစံပြပွဲချိန်
JCGV Junction City (Starium Theater) ပွဲချိန်
10:10AM, 1:00PM, 4:00PM, 7:00PM, 9:40PM (Fri to Sun)
10:10AM, 1:00PM, 4:00PM, 7:00PM (Mon to Thu)
9:15AM, 11:45AM, 2:15PM, 4:45PM, 7:15PM (Fri to Thu)
9:45AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM, ,9:15PM (Fri to Sun)
9:45AM, 12:30PM, 3:30PM, 6:30PM (Mon to Thu)
Mega Ace Cineplex (တာမွေ၊ရွှေဗဟို) ပွဲချိန်
10:15AM၊ 12:45PM၊ 3:45PM၊ 6:45PM၊ 9:15 PM
Mega Ace Cineplex (ဒေါပုံ၊ Capital) ပွဲချိန်
10:30AM၊ 1:00PM၊ 4:00PM၊ 7:00PM၊ 9:30PM
10:30AM, 1:00PM, 3:45PM, 6:30PM, 9:00PM (Fri to Sun)
10:30AM, 1:00PM, 3:45PM, 6:30PM (Mon to Thu)
နေတိုးရဲ့ “ဒီဇာတ်ကောင်နဲ့ ဒီဇာတ်ကောင်က ပေးတဲ့ ရသဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာမရှိနိုင်တော့ဘူး”လို့ ဆိုလာတဲ့ တာတေကြီးကို ဒါရိုက်တာဝိုင်းက ရိုက်ကူးထားပြီး အကယ်ဒမီနေတိုး၊ မင်းသမီး ရွှေသမီးတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တာတေကြီးဇာတ်ကားရဲ့ ရသက ဘယ်လိုဆိုတာတော့…
10:00AM,12:50PM,2:30PM,3:40PM,6:40PM,8:00PM,9:30PM (Fri to Sun)
10:00AM,12:50PM,2:30PM,3:40PM,6:40PM (Mon to Thu)
10:00AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:30PM (Fri to Sat)
10:00AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM (Sun to Thu)
10:00AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM, 9:30PM (Fri to Sun)
10:00AM, 12:45PM, 3:45PM, 6:45PM (Mon to Thu)
9:45AM, 12:30PM, 3:15PM, 6:00PM, 8:45PM (Fri to Sat)
9:45AM, 12:30PM, 3:15PM, 6:00PM (Sun to Thu)
Mega Ace Cineplex (မြောက်ဥက္ကလာပ၊ကန်သာယာ)၊ (ဒေါပုံ၊CAPITAL) ပွဲချိန်
10:15AM ၊ 12:45PM၊ 3:40PM၊ 6:40PM၊ 9:00PM
9:45AM, 12:30PM , 3:15PM, 6:00PM, 8:50PM (Fri to Sun)
9:45AM, 12:30PM , 3:15PM, 6:00PM (Mon to Thu)
တာတေကြီး ရုပ်ရှင်ပြသမဲ့ရက်က 24Nov2017နော်… မြန်မာတနိုင်ငံလုံးက ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ တပြိုင်နက်ပြသမှာဆိုတော့ ရက်အမှတ်မှားနေကြမှာစိုးလို့…. မမတာ က ထပ်အကြောင်းကြားပေးတာပါ….. ??????ကဲ…တာတေကြီး ပရိသတ်ကြီးရဲ့အဖြေကတော့ Trailer ပါတဲ့..နော် နောက်ထပ်လည်း Teaser ထပ်တင်ပေးဦးမှာဆိုတော့ တာတာကို ၀န်းရံပေးကြပါဦးနော် ?
Posted by တာတေကြီး on Wednesday, November 1, 2017
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အစ ကပ္ပိယအဆုံး ရွာမှာ ကပ်နေရတဲ့ အရူးပါမကျန် မယားတွေကို သေမလောက်ကြောက်ရတဲ့ “မယားကြောက်ရွာ”လို့ ဆိုတဲ့ မယားကြောက်ရွာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ပြသပြီ ဖြစ်ပြီး လူမင်း၊ ခန့်စည်သူ၊ ညီထွဋ်ခေါင်၊ခင်လှိုင်၊ ဒိန်းဒေါင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ သွန်းဆက်တို့ ပါဝင်ထားကြပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း၊ဇာတ်ညွှန်း နေစိုးသော်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အရုဏ်ဦး) က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီကားဟာ မြန်မာကားတွေရဲ့ သဘောအတိုင်းဘယ်လို ဟာသလုပ်မလဲဆိုတာတော့…
"မယားကြောက်ရွာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရုံတင်ပြသနေပါပြီ
Posted by မယားကြောက်ရွာ on Tuesday, October 10, 2017
မတူတဲ့နယ်ပယ်က ကြယ်ပွင့်တွေဖြစ်တဲ့ နေတိုး၊ မိုးစက်ဝိုင်နဲ့ ရွှေထူးတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို ဒါရိုက်တာ သားညီရဲ့ ရိုက်ချက်တွေအောက်မှာ တွေ့ရမှာပါ။ ပက်ပက်စက်စက်ဘယ်လိုညှို့မလဲဆိုတာတော့…
9:45AM,12:35PM,3:25PM, 6:20PM,9:10PM (Fri to Sun)
9:45AM,12:35PM,3:25PM, 6:20PM (Mon to Thu)
12:00PM, 5:00AM (Fri to Thu)
12:00PM, 6:00PM (Fri to Thu)
Mega Ace Cineplex (သာကေတ၊မြရတနာ)ပွဲချိန်
9:30AM, 2:45PM (Fri to Thu)
Mega Ace Cineplex (ချမ်းအေးသာဇံ၊မြို့ဂုဏ်ရောင်)ပွဲချိန်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့မှစတင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင်ပြသတော့မည့် ပတ်ပတ်စက်စက်ညှို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမြည်းလာပါပြီ…7Sense Film Production ၏ ဒုတိယမြောက် တင်ဆက်မှု ………. မခူးရဲလျှင် မနမ်းရရနံ့နဲ့တင်ရူးတတ်သည် …နေတိုး၊ ရွှေထူး၊ မိုးစက်ဝိုင်၊ ရဲအောင်၊ ချိုပြုံး၊ ထူးမွန်ဇာတ်လမ်း/ ဇာတ်ညွှန်း – မိုးနီလွင်ဒါရိုက်တာ – သားညီ
Posted by ပက်ပက်စက်စက်ညှို့ on Tuesday, October 31, 2017
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်က အဖြစ်သနစ်စုံကို ဟာသနှောပြီးရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုတဲ့ “ဖေ့စ်ဘုတ်ဘုရင်မ” ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟက ရိုက်ကူးထားပြီး အကယ်ဒမီလူမင်း၊ ကျော်ကျော်ဗိုနဲ့ ရွှေမှုံရတီတို့က သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။မြန်မာကားတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်လို ဖောက်လုံးတွေနဲ့ ရယ်ရအောင် လုပ်မလဲဆိုတာတော့…
ချစ်ပရိသတ်တို့ရေ…(၁၇.၁၁.၂၀၁၇) မှာမြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးရှိအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ပြသတော့မည်……ဖေစ့်ဘုတ်အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာလော်စရာ တုပ်ဆဲ ဟိုဟာပါပျံ စီလီကွန်မကျန်ဆက်စီဖော်ချက် YBS ပါ ဆယ်လီကွက်တို့ပျော်ရွှင်အူးမြှောက် ရှေ့မှောက်ရောက်လာဖေစ့်ဘုတ်ဘုရင်မ နမူနာ….
Posted by ဖေ့စ်ဘုတ်ဘုရင်မ – ရုပ်ရှင်ကားကြီး on Wednesday, November 8, 2017
by Su Yi Htet .2weeks ago
Penshoppe Grand Opening ပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဆယ်လီတို့ရဲ့ ဖက်ရှင်များ
by yoelu .2months ago
မန်ယူအသင်းရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ပယ်နယ်တီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ
MacBook ကြော်ငြာအတွက် Animated Character တွေသုံးလာတဲ့ Apple